Iindlela zokuJolisa kwiWebhusayithi yakho yeTrafikhi | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 8, 2011 Douglas Karr
Singemva kulungelelwaniso lweenguqulelo zethu eziphathwayo kunye ne-iPad zomxholo omtsha kwiMartech… isekusebenzeni, nangona kunjalo! Inye into wena ngeke Isaziso kukuba, ngokusekwe kuhlelo lwesithuba, sineentengiso ezahlukeneyo kwiphepha. Senze oku ngokwenza ngokwezifiso iiwijethi zethu ezinamandla kunye nokusebenzisa iSocket ukubekwa kweentengiso ngokwakho.
Zininzi iindlela zokujolisa kubaphulaphuli bakho kunezixhobo abazisebenzisayo, nangona kunjalo, kwaye le infographic evela kwi-Monetate iyathetha kubo. Ubungakanani be-odolo yamva nje, indawo, ukutyelelwa rhoqo, inkqubo yokusebenza, imozulu, iimveliso okanye amaphepha ajongiweyo kunye nomgama kwiziko lakho lokufezekisa (okanye indawo yeofisi) unokusetyenziselwa ukwenza amava ngendlela efanelekileyo kunye nokunyusa amazinga okuphendula.
Isuka e kwi-infographicUkujolisa ukugcwala kwiwebhusayithi licandelo labathengi ukuphucula amaxabiso okuguqula kwenziwa kuphela ngama-25% abathengisi bedijithali namhlanje. Ngolwazi oluncinci lokujolisa, abathengisi bangaqala ukwenza ngokwezifiso amava ewebhu kuzo zonke iindwendwe. Ukujolisa kuyakuxhamlisa abathengi ngokudala amava asebenza ngokukuko, awenzelwe ngokwahlukeneyo amava okuthenga kwi-Intanethi akhokelela kuguquko oluphezulu.
Uziswe kuwe ngu: Monate -Iqonga lokuthengisa ledijithali onokulisebenzisa ukuvavanya kunye nokuhambisa imveliso yeemveliso ezizezakho, imiyalezo, kunye neempawu, naphina, nakweliphi na iphepha, ngokusekwe kuyo yonke into oyaziyo malunga nendwendwe elijonge elo phepha.
tags: Ukujolisa kwindlela yokuziphathageotargetingimbali yokuthengaekujoliswe kuyoUkujolisa kwimozulu
Novemba 8, 2011 ngo-4: 45 PM
Enkosi ngokwabelana nge-infographic yethu, uDouglas! Ndiyayixabisa ngokwenene.